၃ ပွဲလောက်လွတ်မယ့် မက်ဆီ ၊ အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲကို လွဲမယ့် ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး တို့ အပါအ၀င် . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
၃ ပွဲလောက်လွတ်မယ့် မက်ဆီ ၊ အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲကို လွဲမယ့် ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး တို့ အပါအ၀င် . . . မနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် မှုး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ လာမယ့် တနင်္လာ နေ့ ည မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား မယ့် အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ပရီးမီး ယားလိဂ် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော် မယ် လို့ ကြားသိ ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အန်တိုနီ မာရှယ် က တော့ ပြန်လည် ပါဝင် လာ နိုင်ချေ ရှိ တယ် လို့ ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း တိုက်စစ်မှုး မက်ဆီ ရဲ့ ဒဏ်ရာ ဟာ မျှော်မှန်း ထားသည် ထက် ပိုမို ကြာမြင့် နိုင်ပြီး ယခု အပတ် ကစားမယ့် ဂီတာဖေး ပွဲစဉ် အပါ အ၀င် နောက်ထပ် ၃ ပွဲ လောက် ထပ်မံ အနားယူ ရဖွယ် ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း ကို အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် မှာ ကစား နေစဉ် အတွင်း ကြိုတင် သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိ ခဲ့တဲ့ အတွက် လာလီဂါ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ဒဏ်ငွေ ချမှတ် ခြင်း ကို ခံခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ငွေ ပမာဏ ဟာ ဒေါ်လာ ၃၃၀ သာ ဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါ အပြစ်ဒဏ် အပေါ် ၀ိုင်းဝန်း လှောင်ပြောင်မှုတွေ ရှိခဲ့ ကြပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ စက်တင်ဘာ လ အတွက် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆု အတွက် အော်ဘားမီးယန်း ၊ ဂွမ်ဒိုဇီ ၊ ချမ်းဘားစ် နဲ့ အီမလီ မာတီနက် တို့ က စကာတင် အဖြစ် ပါဝင် လာခဲ့ ကြတယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
စပါး အသင်း ကစား သမား လိုဆယ်ဆို နဲ့ နောက်ခံလူ ဆက်ဆဂ်နွန် တို့ ဟာ ဒဏ်ရာ ကနေ ပြန်လည် သက်သာ လာစ မှာသာ ရှိနေ သေးပြီး ယခု အပတ် ပွဲစဉ် မှာ မြင်တွေ့ ရဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။ စပါး ကွင်းလယ်လူ အဲရစ် ဒိုင်ယာ ကတော့ ကာရာဘောင် ဖလား ရှုံးပွဲ အပြီး မှာ အသင်းသား အချို့ အချင်း များခဲ့ ကြပေမယ့် အခု အချိန် မှာတော့ ရှေ့ လာမယ့် ပွဲတွေ အတွက် သာအာရုံစိုက် နေကြပါပြီ လို့ ဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကနေ ထွက်ခွာ လာပြီး အသင်း လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ နည်းပြ အယ်လီဂရီ ဟာ စပါး အသင်း နည်းပြ သစ် ဖြစ်လာ ဖို့ အလား အလာ ကောင်း နေပြီး စပါး နည်းပြ ပိုချက်တီနို ကတော့ ဇီဒန်း ကို ထုတ်ပယ် နိုင်ချေ ရှိတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း နည်းပြ ဖြစ်လာ ဖို့ သတင်းကြီး နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ကွင်းလယ်လူ ဟောင်း ဇာဗီ ဟာနန်ဒက် ကတော့ သူသာ ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါက မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစား သမား စတာလင် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ ကြိုးစား သွားမယ့် အကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး အသင်း ကွင်းလယ်လူ အဲရစ်ဆင် ဟာ ဇန်န၀ါရီ မှာ သူ့ကို ရောင်းထုတ် မပစ် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားဖို့ ရှိနေပြီး ရီးရဲ ထံ ရာသီ အကုန် မှာ အလွတ် ပြောင်းေ၇ွှ့ ဖို့ အကြို သဘောတူညီမှု ရယူ လိမ့်မယ် လို့ သတင်းထွက် ပေါ် နေ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် လူငယ်လေး စမစ် ရိုဝီ ဟာ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် နဲ့ ကာရာဘောင် ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့မှု ကြောင့် ၂ လ ကျော် အနားယူ ရတော့ မယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒီယေဂို ဒါးလော့ နဲ့ အိန်ဂျယ် ဂိုးမက် တို့ ဟာလည်း ဒဏ်ရာ ရရှိ နေကြပြီး အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲ မှာ ပါဝင် ကစားနိုင် မှာ မဟုတ်သေးဘူး လို့ နည်းပြ ဆိုးရှား က အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကာရာဘောင် ဖလားပွဲ ၊ လီဗာပူး နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေ မှာ တိုက်စစ်မှုး ဂျီရူး ကို မထည့်သွင်း ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှုးကြီး ဟာ ဖျားနာနေတာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် လို့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် က ဆိုသွားခဲ့ ပြီး အခု အချိန် အထိ ပြန်လည် သက်သာ အောင် အားမွေး နေဆဲ ဖြစ် တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး အသင်း အကြီး အကဲ ဒန်နီရယ် လီဗိုင်း ကတော့ သူတို့ရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်မှုး ဟယ်ရီကိန်း အတွက် ပေါင် သန်း ၂၅၀ သတ်မှတ် ထားတယ် လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဇန်န၀ါရီ မှာ တိုက်စစ် ကို အားဖြည့်ဖို့ လိုက်လံ လေ့လာ နေပြီး ပြင်သစ် ကလပ် လိုင်ယွန် ရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဒမ်ဘီလီ ကို စောင့်ကြည့် ဖို့ ကင်းထောက်တွေ စေလွှတ် ထားတယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဟတ်တာ ဘယ်လာရင် ဟာ လည်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲ ကို ပါဝင် ဖို့ အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ် နေ သေးပါဘူး လို့ နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီ က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အမှုဆောင်ချုပ် ဟောင်း ပီတာ ကင်ယွန် ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါ အခြေစိုက် အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခု ကို နယူးကာဆယ် အသင်း အား ပေါင် သန်း ၃၀၀ ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင် ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် ပေး ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ နယူးကာဆယ် ပိုင်ရှင် မိုက် အက်ရ်ှလေ ဟာ အသင်း ကို အဆိုပါ အဖွဲ့ အစည်းထံ ရောင်းထုတ် တော့မယ် လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မိုင်ယာမီ အသင်း နဲ့ မေဂျာလိဂ် ကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် မယ့် ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ကတော့ ယူနိုက်တက် လူငယ် တိုက်စစ်မှုးလေး မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် ကို အငှား ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင် စား နေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားသွားတဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် မှာတော့ တိုရီနို ဟာ အေစီမီလန် ကို အိမ်ကွင်း မှာ ၂ – ၁ ဖြင့် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ ဆိုဆီဒက် ဟာ ဒီပို့တီပို အာလာဗက်စ် အသင်း ကို အိမ်ကွင်း မှာ ၃ – ၀ ဖြင့် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
၃ ပှဲလောကျလှတျမယျ့ မကျဆီ ၊ အာဆငျနယျနဲ့ ပှဲကို လှဲမယျ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှုး တို့ အပါအဝငျ . . . မနကျခငျး အားကစား သတငျးမြား
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ မှုး မားကပျ ရကျဖိုဒျ့ ဟာ လာမယျ့ တနင်ျလာ နေ့ ည မှာ ယှဉျပွိုငျ ကစား မယျ့ အာဆငျနယျ အသငျး နဲ့ ပရီးမီး ယားလိဂျ ပှဲစဉျ ကို လှဲခြျော မယျ လို့ ကွားသိ ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အနျတိုနီ မာရှယျ က တော့ ပွနျလညျ ပါဝငျ လာ နိုငျခြေ ရှိ တယျ လို့ ကွားသိ ရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး တိုကျစဈမှုး မကျဆီ ရဲ့ ဒဏျရာ ဟာ မြှျောမှနျး ထားသညျ ထကျ ပိုမို ကွာမွငျ့ နိုငျပွီး ယခု အပတျ ကစားမယျ့ ဂီတာဖေး ပှဲစဉျ အပါ အဝငျ နောကျထပျ ၃ ပှဲ လောကျ ထပျမံ အနားယူ ရဖှယျ ရှိနတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ဟာ အနျတှိုငျ ဂရဈဇျမနျး ကို အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ မှာ ကစား နစေဉျ အတှငျး ကွိုတငျ သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ ကွောငျး စဈဆေး တှရှေိ့ ခဲ့တဲ့ အတှကျ လာလီဂါ အဖှဲ့ခြုပျ ရဲ့ ဒဏျငှေ ခမြှတျ ခွငျး ကို ခံခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒဏျငှေ ပမာဏ ဟာ ဒျေါလာ ၃၃၀ သာ ဖွဈတာကွောငျ့ အဆိုပါ အပွဈဒဏျ အပျေါ ၀ိုငျးဝနျး လှောငျပွောငျမှုတှေ ရှိခဲ့ ကွပါတယျ ။
အာဆငျနယျ အသငျး ရဲ့ စကျတငျဘာ လ အတှကျ တဈလတာ အကောငျးဆုံး ကစား သမား ဆု အတှကျ အျောဘားမီးယနျး ၊ ဂှမျဒိုဇီ ၊ ခမျြးဘားဈ နဲ့ အီမလီ မာတီနကျ တို့ က စကာတငျ အဖွဈ ပါဝငျ လာခဲ့ ကွတယျ လို့ သတငျး ရရှိ ပါတယျ ။
စပါး အသငျး ကစား သမား လိုဆယျဆို နဲ့ နောကျခံလူ ဆကျဆဂျနှနျ တို့ ဟာ ဒဏျရာ ကနေ ပွနျလညျ သကျသာ လာစ မှာသာ ရှိနေ သေးပွီး ယခု အပတျ ပှဲစဉျ မှာ မွငျတှေ့ ရဦးမှာ မဟုတျဘူးလို့ သိရ ပါတယျ ။ စပါး ကှငျးလယျလူ အဲရဈ ဒိုငျယာ ကတော့ ကာရာဘောငျ ဖလား ရှုံးပှဲ အပွီး မှာ အသငျးသား အခြို့ အခငျြး မြားခဲ့ ကွပမေယျ့ အခု အခြိနျ မှာတော့ ရှေ့ လာမယျ့ ပှဲတှေ အတှကျ သာအာရုံစိုကျ နကွေပါပွီ လို့ ဆိုသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
ယူဗငျတပျ ကနေ ထှကျခှာ လာပွီး အသငျး လကျမဲ့ ဖွဈနတေဲ့ နညျးပွ အယျလီဂရီ ဟာ စပါး အသငျး နညျးပွ သဈ ဖွဈလာ ဖို့ အလား အလာ ကောငျး နပွေီး စပါး နညျးပွ ပိုခကျြတီနို ကတော့ ဇီဒနျး ကို ထုတျပယျ နိုငျခြေ ရှိတဲ့ ရီးရဲ မကျဒရဈ အသငျး နညျးပွ ဖွဈလာ ဖို့ သတငျးကွီး နတေယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး ကှငျးလယျလူ ဟောငျး ဇာဗီ ဟာနနျဒကျ ကတော့ သူသာ ဘာစီလိုနာ နညျးပွ ဖွဈလာ ခဲ့ ပါက မနျစီးတီး တောငျပံ ကစား သမား စတာလငျ ကို ချေါယူ ဖို့ ကွိုးစား သှားမယျ့ အကွောငျး ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
စပါး အသငျး ကှငျးလယျလူ အဲရဈဆငျ ဟာ ဇနျနဝါရီ မှာ သူ့ကို ရောငျးထုတျ မပဈ နိုငျဖို့ ကွိုးစား သှားဖို့ ရှိနပွေီး ရီးရဲ ထံ ရာသီ အကုနျ မှာ အလှတျ ပွောငျးရှေ့ ဖို့ အကွို သဘောတူညီမှု ရယူ လိမျ့မယျ လို့ သတငျးထှကျ ပျေါ နေ ပါတယျ ။
အာဆငျနယျ လူငယျလေး စမဈ ရိုဝီ ဟာ နျောတငျဟမျ ဖောရကျဈ နဲ့ ကာရာဘောငျ ပှဲမှာ ဒဏျရာ ရရှိ ခဲ့မှု ကွောငျ့ ၂ လ ကြျော အနားယူ ရတော့ မယျ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမား ၂ ဦး ဖွဈတဲ့ ဒီယဂေို ဒါးလော့ နဲ့ အိနျဂယျြ ဂိုးမကျ တို့ ဟာလညျး ဒဏျရာ ရရှိ နကွေပွီး အာဆငျနယျ နဲ့ ပှဲ မှာ ပါဝငျ ကစားနိုငျ မှာ မဟုတျသေးဘူး လို့ နညျးပွ ဆိုးရှား က အတညျပွု ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ကာရာဘောငျ ဖလားပှဲ ၊ လီဗာပူး နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲတှေ မှာ တိုကျစဈမှုး ဂြီရူး ကို မထညျ့သှငျး ခဲ့ရတဲ့ အကွောငျး အရငျး ကတော့ ပွငျသဈ တိုကျစဈမှုးကွီး ဟာ ဖြားနာနတော ကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ လို့ ခြဲလျဆီး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ က ဆိုသှားခဲ့ ပွီး အခု အခြိနျ အထိ ပွနျလညျ သကျသာ အောငျ အားမှေး နဆေဲ ဖွဈ တယျလို့ ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
စပါး အသငျး အကွီး အကဲ ဒနျနီရယျ လီဗိုငျး ကတော့ သူတို့ရဲ့ အဓိက တိုကျစဈမှုး ဟယျရီကိနျး အတှကျ ပေါငျ သနျး ၂၅၀ သတျမှတျ ထားတယျ လို့ ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဇနျနဝါရီ မှာ တိုကျစဈ ကို အားဖွညျ့ဖို့ လိုကျလံ လလေ့ာ နပွေီး ပွငျသဈ ကလပျ လိုငျယှနျ ရဲ့ တိုကျစဈမှုး ဒမျဘီလီ ကို စောငျ့ကွညျ့ ဖို့ ကငျးထောကျတှေ စလှေတျ ထားတယျ လို့ သိရှိရ ပါတယျ ။
အာဆငျနယျ အသငျးရဲ့ နောကျခံလူ ဟတျတာ ဘယျလာရငျ ဟာ လညျး မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး နဲ့ ကစားမယျ့ ပှဲ ကို ပါဝငျ ဖို့ အတှကျ အဆငျသငျ့ မဖွဈ နေ သေးပါဘူး လို့ နညျးပွ အူနိုငျး အမျမရီ က ထုတျဖျော ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ခြဲလျဆီး နဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အမှုဆောငျခြုပျ ဟောငျး ပီတာ ကငျယှနျ ဟာ အမရေိကနျ နိုငျငံ ဖလျောရီဒါ အခွစေိုကျ အဖှဲ့ အစညျး တဈခု ကို နယူးကာဆယျ အသငျး အား ပေါငျ သနျး ၃၀၀ ဖွငျ့ ၀ယျယူနိုငျ ဖို့ အတှကျ လုပျဆောငျ ပေး ခဲ့တယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။ နယူးကာဆယျ ပိုငျရှငျ မိုကျ အကျရျှလေ ဟာ အသငျး ကို အဆိုပါ အဖှဲ့ အစညျးထံ ရောငျးထုတျ တော့မယျ လို့လညျး ကွားသိရ ပါတယျ ။
အငျတာ မိုငျယာမီ အသငျး နဲ့ မဂြောလိဂျ ကို ၀ငျရောကျ ယှဉျပွိုငျ မယျ့ ဒေးဗဈ ဘကျခမျး ကတော့ ယူနျိုကျတကျ လူငယျ တိုကျစဈမှုးလေး မဆေငျ ဂရငျးဝုဒျ ကို အငှား ချေါယူ ဖို့ စိတျဝငျ စား နတေယျ လို့ ကွားသိရ ပါတယျ ။
ယမနျနေ့ ညက ကစားသှားတဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျ မှာတော့ တိုရီနို ဟာ အစေီမီလနျ ကို အိမျကှငျး မှာ ၂ – ၁ ဖွငျ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။ လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ ဆိုဆီဒကျ ဟာ ဒီပို့တီပို အာလာဗကျဈ အသငျး ကို အိမျကှငျး မှာ ၃ – ၀ ဖွငျ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။